Uur ma dooneysaa in aad hore ka qaadid -Talo Muhiim ah | shumis.net
Home » galmada » Uur ma dooneysaa in aad hore ka qaadid -Talo Muhiim ah
Uur ma dooneysaa in aad hore ka qaadid -Talo Muhiim ah
Madooneysaa Inaad Dhaqso Uu Qaado ama Hamila noqota ? Ha ka cajisin inaad quraacda!.
Cilmi baaris la sameeyay ayaa waxey sheegeysaa haweenka doonaya iney uur qaadaan ama xamila noqdaan ay ku dadaalaan quraacda subaxdii, iyada oo quraac fiican cunta, haweenka jirkooda ayaa waxaa uu noqonayaa mid stabil ah iyada oo kontroleysa insulin,testosteron iyo hormon kuwaas oo taageera uur qaadka.
Sida laga soo xigtey shabakada daily mail,qayaastii 6-10 persen haweenka xiliga ay galayaa uur qaadista waxaa ku dhaca polycystic ovary syndrome () kaas oo sababa iney uur qaadi weyso ama xalima noqon weyso.
waxaa jira dhibaatooyin uu keeno waxaa waayo inuu kor ukaco Hormon ragga (),xiliga xeylka imanaya oo aan waqtiyaysneen ama aan jadwal laheeyn tinta oo soo dhacda, camuura ama finin kaa soo baxa,dhibaato ah inaad uur qaadi weyso ama aay kuugu dhacdo kaadi sogor.
Tiro gaareysa 60 haween ah oo sanad kooda udhaxeeya 25-39 sanno ayaa lagu sameeyay cilim baaristaan mudo dhan 12 isbuuc waxaana sameeyay khabiir ka mid ah Hebrew University of Jerusalem.
HOOS KA DAAWO QAABABKA:
“Haweenka doonaya iney dhaqsi uur qaadaan waxaa wanaagsan iney ka cajisan quraacda subaxdii quraacdaas oo ah mid caafimaad leh iyo cuntada oo badan” Madaxa cilmi baarista Profesor Oren Froy.
Title: Uur ma dooneysaa in aad hore ka qaadid -Talo Muhiim ah